musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Canada kuvhura miganhu kune vakazara vafambi
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege dzenyika dzepasi rose dzakatakura vafambi dzinobvumidzwa kumhara kunhandare shanu dzekuwedzera dzeCanada.
Hurumende inotarisira kuvhura miganho yeCanada kune chero vafambi vakazara vaccine vakapedza iyo yakazara nzira yekubaiwa neHurumende yeCanada-inogamuchirwa jekiseni mazuva gumi nemana vasati vapinda muCanada.
Vafambi vese vanofanirwa kushandisa ArriveCAN (app kana webhu portal) kuendesa yavo yekufambisa ruzivo.
Vafambi vese, kunyangwe paine chinzvimbo chekubaiwa, vachatoda pre-kupinda COVID-19 mamorekuru bvunzo mhedzisiro.
Hurumende ye Kanadha iri kuisa pamberi hutano nechengetedzo yemunhu wese muCanada nekutora nzira ine njodzi-uye yakayerwa yekuvhurazve miganhu yedu. Nekuda kwekushanda nesimba kwevaCanada, kukwira kwehuwandu hwekudzivirira uye kudzikira kwezviitiko zveCOVID-19, Hurumende yeCanada inokwanisa kuenda kumberi neakagadziriswa mabhanhire matanho.
Musi waGunyana 7, 2021, kunze kwekunge mamiriro epamba epidemiologic aramba akanaka, Hurumende inotarisira kuvhura miganho yeCanada kune chero vafambi vakazara vaccine vakapedza iyo yakazara nzira yekubaiwa neHurumende yeCanada - inogamuchirwa mushonga mazuva gumi nemana vasati vapinda. Canada uye vanosangana nezvinodiwa zvekupinda.
Sekutanga nhanho, kutanga Nyamavhuvhu 9, 2021, Kanadha Zvirongwa zvekutanga kubvumidza kupinda kuzvizvarwa zveAmerica uye vagari vechigarire, avo vari kugara muUnited States, uye vakabayiwa jekiseni zvizere mazuva gumi nemana vasati vapinda muCanada nekuda kwekufamba kusiri kukosha. Iyi danho rekutanga rinobvumidza iyo Hurumende yeCanada kuti ishandise zvizere matanho akaganhurwa emuganhu pamberi paSeptember 14, 7, uye vanoziva hukama hwakawanda pakati pevaCanada nemaAmerican.
Zvichienderana nezvakatemerwa kunze, vese vafambi vanofanirwa kushandisa ArriveCAN (app kana webhu portal) kuendesa yavo yekufambisa ruzivo. Kana ivo vachikodzera kupinda muCanada uye vanosangana nematanho chaiwo, vafambi vakazara vachengeti havazofanirwi kugara kwavo vega pakusvika muCanada.
Kuenderera mberi nekutsigira matanho matsva aya, Kutakura Canada kuri kuwedzera huwandu hweChiziviso chiripo kuAirmen (NOTAM) icho pari zvino chinotungamira dzakarongwa ndege dzepasirese kutakura vanhu kuenda kuCanadian Airports: Montréal-Trudeau International Airport, Toronto Pearson International Airport, Calgary International Airport, uye Vancouver International Airport.